युगसम्बाद साप्ताहिक - कसरी पाउँलान् पीडितले राहत
Monday, 02.17.2020, 08:35pm (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 06.30.2015, 12:46pm (GMT+5.5)
भूकम्पपछि राहत वितरणमा व्यापक जनपरिचालन भएको देखियो । राहत नबाँड्ने कुनै निकाय रहेन । देश–विदेशका हरेक संस्थाले राहत बाँडे । यति र उति संख्याका पीडित र प्रभावितलाई राहत दिएको प्रचारवाजी भयो । तर, कतिले राहतको नाममा सुविधाको भण्डारण गरे कति कति पाउनैपर्नेले दुई छाक खान पुग्ने पनि पाएनन् भन्ने अनुसन्धानको विषय छ । समाचारहरूमा यस्ता कुरा पनि आइरहेका छन् । राहत पाउनका लागि हात फैलाउँदै भिख माग्नेले जति पनि पाए । तर, पीडित भए पनि आफ्नो आत्मसम्मान नबेच्नेहरूले केही पाएनन् । यो दृश्य काठमाडौंभित्रै देखियो । जान्ने सुन्नेहरूबाटै भयो । अर्कोतिर काठमाडौंभित्रै दुई महिनासम्म पनि एक पाथी चामल समेत नपुगेको पनि देखियो ।
अहिले मुलुकको परिस्थिति विस्तारै बदलिंदैछ । मुलुक संविधान बन्ने चरणमा छ । विदेशीहरूले ४४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण तथा अनुदानको घोषणा गरे । त्यो रकमले मुलुकको पुनःनिर्माण कसरी गर्ने भन्ने सरकारको चिन्ता दूर भएको छ । तर, सहयोग कहिलेसम्म आउने हो, यक्किन छैन । घरबारविहीन जनताले कतिवर्षसम्म विदेशीले पैसा पठाउला र घरमा बस्न पाइएला भनेर कुर्नुपर्ने हो । अहिले यस्तै प्रश्न जताततै छ ।
मुलुकको राजनीति विस्तारै सहजतातर्फ उन्मुख छ । भकम्पका पराकम्पनहरू कम हुँदै गएको छ । जनजीवन सामान्यतर्फ लम्किदैछ । राजनीतिक दलहरू संविधान लेखनको रस्सकस्सीमा छन् । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भैसकेको छ । यो एउटा अलग्गै पाटो हो । तर पनि २०७२ वैशाखको आधा महिनाको बीचमा तीनवटा भूकम्पको धक्कापछि मुलुकमा राहत, उद्धार र सहयोगको मात्रै चर्चा र हल्ला चलिरहे र अहिले पनि यो जारी छ । राहत र पुनःनिर्माण अबको चरण हुनुपर्ने सुझावहरू पनि व्यक्त भैरहेका छन् । लाखौं घरबारविहीनहरू अहिले त्रिपाल र अस्थाई टहरामा रात गुजिरिरहेका छन् । गाउँका गाउँ विस्थापित भएको छ । पुनर्बासको बन्दोबस्त हुन सकेको छैन । सरकार अहिले पनि योजना बनाउँदैछ । दाताको सहयोग आएपछि काम पनि गर्छ होला । नत्र अहिलेकै गतिविधि हेर्ने हो भने भूकम्प पीडितले राज्यका तर्फबाट तत्काल गतिलो सहयोगको अपेक्षा गर्न नसक्ने स्थिति छ । किनभने सरकार मगन्ते छ । आफ्ना स्रोत–साधनको परिचालन नगरी विदेशीको मुखताक्ने प्रवृत्ति विनाशकारी भूकम्पपछि अरु बढ्यो ।
परस्थिति कस्तोसम्म सिर्जना भयो भने वैशाख १२ गतेको भूकम्पको एक हप्तासम्म राजनीति पूरै हरायो, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरू भूमिगत जस्तै भए । राजनीतिक संक्रमणले थिलथिलो भएको मुलुकमा भूकम्पको प्रकोपले अरु पछाडि धकेलियो । यस्तो बेलामा कसरी सहज अवस्था निर्माण गर्ने र पीडितलाई निस्वार्थ भावले सेवा उपलब्ध गराएर उनीहरूको बाँच्ने आधार तयार गर्ने भन्नेतिर समाजसेवी तथा सहयोगीहरूको ध्यान पटक्कै जान सकेन । राहतको नाममा जसले पनि चामल, चाउचाउ, चिउरा र त्रिपाल बाँड्ने । धेरै भूकम्प पीडितको बासस्थानमा यी वस्तुको थुप्रो लागेको छ । अनि दुर्गम गाउँमा पुगेकै छैन । राहत र उद्धार गर्नेहरूले पनि वातानुकुलित गाडीमा जान सकिने ठाउँमा गएर बाँड्ने अनि फोटो खिचेर फेसबुकमा हाल्ने गरे । आआफ्नो स्वार्थ अनुसारका काम भए । चाउचाउ र बिस्कुटसंग धर्मको किनबेच गर्ने मेसो समेत चलाइयो ।
सरकार विदेशीले पैसा देला र क्षतिपूर्ति दिउँला भनेर बसिरहेको छ । मनसुन सुरु भैसक्यो । लाखौं घरबाविहीनको अवस्था अहिले पनि त्रिपालमुनीकै छ । उनीहरूले अस्थायी भए पनि बासस्थान नपाए कसरी यो वर्षा काट्लान् ? अर्कोतिर धरातल नै खबलिएका गाउँका बासिन्दालाई कहाँ लाने ? योजना मात्र बन्दैछ, कार्यान्वयन छैन । विपत्तिमा काम गर्ने क्षमता हाम्रो रैनछ भन्ने पीडादायी अवस्था अहिले छ । के हाम्रो नियति विपत्तिको सामना गर्न नसकेरै कष्ट भोग्नुपर्ने मात्रै हो त भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । आशा गरौं, लाखैं भूकम्प पीडितहरूको जीवन सहज बनाउन सबैको एकताबद्ध प्रयास होस् । अहिले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू जसरी अस्थायी बास बनाउन जुटेका छन् त्यो काम निरन्तर जारी रहोस् । राजनीतिक दल भनेका जनताको सेवाकै लागि गठन भएका हुन् भन्ने भावना जनतामा स्थापित होस् ।